वीरगन्ज ५ लाई समृद्ध वडा बनाउन के गरियो के गर्न बाँकी छ ? यस्तो भन्छन् स्थानीय ! :: मध्य नेपाल संवाददाता :: वीरगन्ज ५ लाई समृद्ध वडा बनाउन के गरियो के गर्न बाँकी छ ? यस्तो भन्छन् स्थानीय !
मुलुकमा दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनमा प्रायः मुलुकभर पहिलो निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरु पराजित भए । वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ५ मा भने पहिलेका वडाध्यक्ष नै पुनः निर्वाचित भएका छन् । उनको टिम नै प्रायः यो पटक पनि निर्वाचित भयो । महानगरका ३२ वटा मध्ये पहिलो पटक पनि नमूना वडा भनिएको वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ५ मा २०७४ को निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले के राम्रै काम गरेका थिए ? वा अरु के के काम गर्न बाँकी छन् ? जस्ता बिषयमा दोस्रो पटक पनि निर्वाचित वडाध्यक्ष प्रदिप चौरसिया र स्थानीयसँग यो वडालाई समृद्ध बनाउन के गरियो के गर्न बाँकी छ ? भनी सोधिएको जिज्ञासामा उनीहरुको प्रतिकृया :
पहिलेको निर्वाचनको समयमा घोषणा पत्र तयार गरिएको थियो । त्यही घोषणा पत्र अनुसारको केही कामहरु गर्न बाँकी रहेका छन् । अधिकतम कामहरु पुरा गरिसकेका थियौ । पहिले निर्वाचित भएको समयमा यस वडामा सडक नाला र फोहोर मैला एकदमै अव्यवस्थित थियो । त्यसै शिलशिलामा हाम्रो वडालाई कसरी समृद्ध र सफा स्वच्छ बनाउन सकिन्छ । भनेर वडा नं ५ लाई ४ भागमा विभाजन गरेर विकासको काम थालनी गरेका थियौ । पहिले चरणको सडक नाला बनाउने कार्य जेलपछाडीको सडकबाट सुरु गरिएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाको बारेमा काम गर्यांै । यस वडाको सुचना प्रवाहको लागि डिजिटल बोर्ड लगायौ । अहिले दोस्रो कार्यकालमा सबैभन्दा पहिला शिक्षा स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागी ११ ठाँउमा सिसि क्यामेरा जडान गरेका छौ । त्यसको कन्ट्रोल रुम सामुदायिक प्रहरी केन्द्रमा राखेका छौं । १ देखि ३२ वटै वडामा हाम्रो वडालाई नमुना वडा बनाउन सफल भएका थियौ अब पनि अझै वडा वासीको सल्लाह सुझाव र उहाँहरुको सहयोगको अपेक्षा राखेको छु । ५ नं वडाको प्रत्यके टोलमा १५ दिन देखि १ महिनाको विचमा जनतासगं जनप्रतिनिधिको बैठक बसी उहाँहरुको समस्या गुनासो सुन्दै योजना बनाउदै अगाडी बढिरहेको छु । अझै यस वडालाई समृद्ध बनाउन वडावासीका साथै सहयोग र उहाँहरुसंग हातेमालो गर्दै यस वडालाई अझै समृद्ध वडा बनाउने योजना बनाएको छु ।
वितेका ५ वर्षमा एकदमै राम्रो काम गर्नु भएको छ । सवै जनताको नजिकपन बसेर सबैको कुरा सुनेर उहाँले ५ वर्षे कार्यकाल बिताउनु भयो । फेरी दोस्रो कार्यकालमा पनि उहाँले फेरि पनि राम्रा कामहरु गर्नेछन् । यस वडामा विकासको काम प्रायः जसो सवै नै सकेको छ । कुनै कुनै कामहरु बाँकी रहेका छन् । सडकहरु सवै समयमै सकेको छ । नालाको काम बाँकी छ । यो काम पनि यसपाली गर्नुहुन्छ, भन्ने आशा छ । अरु बाँकी शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगार जेजति उहाँको लक्ष्य र योजनाहरु छन् । सवै गर्दै जाने छन् । जो गरिब दुःखी अहसहाय छ । उहाँहरुको सेवा गर्छन् भने ठूलो भरोसा राखेको छु ।
गरिवी निवारणको लागि शिक्षामा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृतिको व्यवस्था मिलाइदिनु भएको थियो । अवको शिक्षा वडा नं ५ भित्र रहेका विद्यालयहरुमा महिनामा एकपटक छड्के चेकिङ्ग गर्नुपर्छ जस्तै विद्यालयले लिएको शुल्क अनुसारको शिक्षामा दिनुपर्ने सुविधा र क्वालिटी छ की छैन ? त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । जस्तै ११÷१२ व्याचलर पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई प्रोफेसर, लेक्चरहरु जस्ता उच्च शिक्षाको कुनै कक्षाहरु संचालन गरिदिए उच्च शिक्षाको बढोत्तरी हुन्छ जस्तो लाग्छ । नाला बनाउँदा बन्द नाला एउटा लामो समयसम्म टिकाउ हुने यस्तो काम वडा नं ५ भरी सवै ठाँउमा गरिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो । यस वडावासीले आफनो आम्दानीको स्रोत बढाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउदा झन अझै राम्रो हुन्छ । हाम्रा वडा भित्र रहेको संस्था, कम्पनी अफिसहरु कति वटा दर्तामा छन् ? संचालनमा छन् की छैनन् ? वडा भित्रका मानिसलाई रोजगार दिइएको छ की छैन । करहरु तिरेको छ छैन ? सवै कुराको निगरानी गरिनु पर्छ । वडा भित्र रहेका यूवाहरु रोजगार छ छैन । यदि छैनन् भने उनीहरुलाई प्रोसाहित गरेर तरकारी पसल नै किन नहोस् आफै वडा भित्र गर्न लगाउने । आफनो वडाको पैसा आफ्नै वडा भित्र नै घुमाउने हो भने यहि नै त हो समृद्धि भनेको ।
मेरो विचारमा विकासको कामहरु धेरै जसो भइसकेको छन् । थोरै बाँकी छन् । त्यो सबै जनताको सल्लाह सुझाव अनुसार गर्दै आइरहनु भएको छ । अब पनि काम गर्नु हुन्छ भन्ने आशा छ । जस्तै सि.सि. क्यामेरा जडानमा समस्या छ । त्यो चाडै समस्या समाधान गर्नुपर्छ । र नाला पनि बनाउनु पर्ने सवै वडा भित्रका नालाका समस्याको समाधान चाडै नै गर्नुृ हुन्छ । अरु वाँकी काम गर्दै गराउदै जादा हुदै जाने कुरा हो । भैहाल्छ सवैको पहुचमा रहेर काम गर्ने दृढ इच्छा कायम नै रहोस् । अझै राम्रा कामहरु सम्पन्न होस् । हाम्रो वडालाई समृद्ध वडा बनाउन सफल होस् ।
हाम्रो यस वडामा धेरै नै विकासका कामहरु भएको छन् । अझै केही कामहरु गरिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो यूवाहरुलाई रोजगार कति यूवाहरु वेरोजगार बसेका छन् । उनीहरुलाई रोजगारीको आफ्नो वडा भित्र रहेको सघं संस्थामा आवद्ध गराउने व्यवस्था गराउनु भए अझै राम्रो हुन्थ्यो । जस्तै वडा भित्र रहेका खेलकुद क्रिकेट टिम फुटवल टिमहरु छन् । उनीहरुलाई पनि अलि वडाबाट ध्यानमा राखेर अलि प्रोत्साहन गथ्र्र्याे भने राम्रो हुन्छ । हामी यूवाहरुको अनुरोध वडा अध्यक्षसगं शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइको साथ साथै खेलकुदमा पनि ध्यान दिनु प¥यो भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
हाम्रो यस वडामा २ स्तरका व्यक्तिहरु छन् । एउटा अलि हुने खाने धनी व्यक्ति र एउटा गरिब मूलका व्यक्तिहरु छन् । माथिल्लोस्तरका व्यक्तिहरुको शान्ति सुरक्षा त आफैमा छन् । गरिब व्यक्तिहरुको समृद्धि कसरी गराउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यस वडाका वडा अध्यक्षको पनि ध्यान केन्द्रित भएको छ । यस विषयमा व्यापक रुपमा छलफल भैराखेको छ । गरिब व्यक्तिहरुलाई शिक्षा स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिन जरुरी रहेको छ । सरसफाईमा पनि ध्यान दिएका छौ । हाम्रो यस वडालाई समृद्ध वडा बनाउन हामी सबै लागी परेका छौ । हिजोको दिनमा जे जति कामहरु भए त्यसभन्दा पनि अझ कति सुन्दर हुन सक्छ । राम्रो बनाउन सकिन्छ । हामी प्रयासरत छौ । योजनाहरु तयारी नै छ । चाडो नै सुरु हन्छन् । जब की सबैस्तरका व्यक्तिहरुले हामीलाई ध्यानमा राखेनन् भन्ने जस्ता कुनै गुनासो नगर्ने किसिमले सबैलाई एकनास मिलाएर लिएर अगाडी बढ्ने प्रयास गर्छौं ।
यस वडामा शिक्षा स्वास्थ्य सरसफाई सबै काम एकदमै राम्रो भएको छ । महिलाहरुको लागि सिलाई बुनाइ र व्यूटिसियन जस्ता तालिमहरु दिएका थिए । त्यस किसिमको तालिम आफु भित्र नै सिमित भएको पाए । अबका दिनमा आधुनिक टेक्निकल जमाना छ । यस समयमा कम्प्युटर तालिम र मन्टेश्वरी जस्ता तालिमहरु उपलब्ध गराई दिनु भए अझै सुनमा सुगन्ध थपिए जस्तै हुन्थ्यो । पढेलेखेका महिलाहरुले मन्टेश्वरी स्कूलमा जागिर गर्छन् । अथवा कसै कसैले आफैले पनि संचालन गरेर आफ्नै वडा भित्रका बच्चाहरुलई मनोरञ्जनको साथै शिक्षा प्रदान गर्ने मौका पाउँथे । यस वडामा यसको व्यवस्थापन आवश्यक छ ।
सबैभन्दा पहिले सडक बनाएका छन् । शिक्षाको क्षेत्रमा बच्चाहरुलाई साइकल वितरण गरेका छन् । सिलाई बुनाइ सिकेकाहरुका लागि सिलाई मेसिन दिएका छन् । जो गरिब, दिनदुखी छन् । उनीहरुको समस्या सुनेर बुझेर आफुले गर्न सक्ने सहयोग गरिरहेका छन् । जो गरिब छन्, बुढाबुढी भैसकेका छन् उनीहरुसंग पैसा छैन भने पनि औषधी पनि उपलब्ध गराइदिएका छन् । शिक्षाको क्षेत्रमा बच्चाहरुलाई स्कूल पठाउने व्यवस्था मिलाएका छन् । धेरै नै राम्रो काम गरेका छन् । अझ अगाडी धेरै नै राम्रो काम गर्ने छन् भन्ने विश्वास गरेकी छु ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २३, २०७९ १७:२५